ဆိုင်မှာ ဝက်တစ်နေလှန်းကြော်စားရတာ အားမရသူတွေအတွက် | yathar Magazine
ဆိုင်မှာ ဝက်တစ်နေလှန်းကြော်စားရတာ အားမရသူတွေအတွက်
စက်တင်ဘာ 20, 2019
အိမ်မှာပဲ ကိုယ်တိုင် ဝက်တစ်နေလှန်းကြော်လုပ်စားနည်းကို သိချင်နေကြပြီလား။ဆိုင်မှာဆို စားကောင်းလွန်းလို့ ဘယ်မှပွဲမှာမှာလောက်ကိုမဝဘူး။ အခုတော့ ဒီနည်းလမ်းလေးကို သိသွားပြီဆိုတော့ ကိုယ်တွေလို ဝက်တစ်နေလှန်းကြော်အရမ်းကြိုက်ကြတဲ့သူတွေအတွက် အိမ်မှာပဲ အဝလုပ်စားလို့ရပြီလေ။ အဲ့တော့ ဝက်တစ်နေလှန်းခြောက်ကြော်လေးကို ဘယ်လိုလုပ်မလဲ သိချင်နေကြပြီလား။ ဒါဆိုရင် ဖတ်ကြည့်လိုက်ကြစို့နော်။
ဝက်အသားချည်းပဲ 500 grams
တရုတ်နံနံပင်အမြစ် ၄ ခု (သို့) ၅ ခု
ကြက်သွန်ဖြူအကြီး ၃ မွှာ ( သို့) ၄ မွှာ
ငရုပ်ကောင်းအမှုန့် စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ ဇွန်း
သကြား စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ ဇွန်း
ခရုဆီ စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ ဇွန်း
ငါးငံပြာရည် စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ ဇွန်း
နှမ်း( မထည့်လည်းရ) စားပွဲတွင်ဇွန်း ၃ ဇွန်း (သို့) ၄ ဇွန်း
ဝက်သားကို လက်တစ်လုံးအရွယ် အမြှောင်းလေးတွေဖြစ်အောင် လှီးပါ။ကြက်သွန်ဖြူနှင့် တရုတ်နံနံပင် အမြစ်ကို လှီးပြီး အနှစ်ဖြစ်တဲ့အထိ ငရုတ်ဆုံဖြင့် ထောင်းပါ။ပြီးလျှင် ပါဝင်ပစ္စည်းအားလုံး( ဝက်သားမပါ) ကို ခုဏက အနှစ်နဲ့ရောမွှေပါ။ ပြီးလျှင် ဝက်သားကိုထည့်ပြီး နယ်လိုက်ပါ။နေလှန်းပြီး မစားချင်သူတွေအတွက် ဝက်သားကို ကြာကြာနှပ်ထားပါ။နေလှန်းပြီးမှ စားချင်သူတွေအတွက် အခန်းအပူချိန်အတိုင်း ၁ နာရီခန့်ထားပါ။ပြီးမှ နေအပူချိန်ပေါ်မူတည်ပြီး ၂ နာရီကနေ ၄ နာရီအတွင်း ဝက်သားကို နေလှန်းထားပါ။နေလှန်းထားတုန်း အနည်းဆုံး ၂ ခါလောက်တော့ အခြေအနေကို သွားကြည့်ပေးပါ။ပြီးရင် နေလှန်းထားသော ဝက်သားခြောက်ကို ယူပြီး ဆီပူပူလေးနှင့်ကြော်လို့ရပါပြီ။အရောင်လှလှလေး ထွက်လာရင် ဝက်သားများကို ပြန်ဆယ်ပြီး ကြိုက်နှစ်သက်ရာ sauce နှင့် တွဲဖက်စားသုံးနိုင်ပါပြီ။
ဒီလိုမျိုးလွယ်ကူတဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့ စားချင်စဖွယ် ဟင်းချက်နည်းတွေကို အမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ ဟင်းချက်နည်းများကို အမြဲတမ်းဖတ်ရှုချင်တယ် ဆိုရင်တော့ Yathar page လေးကို like လုပ်ထားဖို့တော့လိုမယ်နော်
မတ် 30, 2021
ဇန်နဝါရီ 12, 2021
yathar, Marketing Dep. / Senior Content Writer.
2018 February တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ Yathar Launching မွာကတညး္က charter member တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ စတင္ပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။
စာေရးရတာ ႏွစ္သက္တဲ့သူ တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ဟာသဥာဏ္ရႊင္လို႔ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတတ္တဲ့သူလည္းျဖစ္ပါတယ္။ အစားအေသာက္ကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့သူျဖစ္ၿပီးေတာ့ အစားစားေနရရင္လည္း ေပ်ာ္ေနတတ္သူေလးပါ။
ဆေးပေါင်းခတဲ့ညကို အသက်သွင်းမယ့် သုပ်နည်း၊ ပြုတ်နည်း
သာမာန်ထိုင်းစတိုင်နဲ့ မတူတဲ့ ခေါက်ဆွဲကြော်က ဘယ်လိုမျိုးလဲ